လိင်စိတ်နှိုးဆွသောရုပ်ရှင်ကောက်နှုတ်ချက်များကိုကြည့်ရှုစဉ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းတွင် ဦး နှောက်ကိုလှုပ်ရှားမှုနယ်ပယ်များ (၂၀၀၂) - Your Brain On Porn
Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 2002 May;16(1):1-13.
Karama S က, Lecours AR, Leroux JM, Bourgouin P, Beaudoin, G, Joubert S က, Beauregard M က.
အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံစင်တာများ၊ Université de Montréal, CP 6128, succursale Center-Ville, Montreal, Quebec, Canada H3C 3J7 ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အမျိုးမျိုးသောသက်သေအထောက်အထားများအရအမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုလိင်ဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုပိုမိုများပြားသည်။ သို့သျောလညျး, ထိုကဲ့သို့သောကျားမကွဲပြားမှုအခြေခံ neurobiological ဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်။ လူသိများသည်။ ဤပြissueနာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်၊ အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ကိုအမျိုးသား ၂၀ မှအမျိုးသမီးဘာသာရပ် ၂၀ တွင်ရှိသော SA ၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွသောရုပ်ရှင်ကောက်နုတ်ချက်များကိုကြည့်ရှုစဉ် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုင်းတာသည်။ ရလဒ်များအရရိပ်မိ SA ၏အဆင့်သည်အထီးအမျိုးသမီးများထက်အမျိုးသားများတွင်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားကြောင်းပြသခဲ့သည်။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာကြားနေရုပ်ရှင်ကောက်နှုတ်ချက်များကိုကြည့်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်လိင်ဆိုင်ရာနှစ် ဦး နှစ်ဖက်သွေးအောက်စီဂျင်အဆင့်မှီခိုမှု (BOLD) အချက်ပြမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း၊ အဆိုပါ amygdala နှင့် ventral striatum ၌တည်၏။
အထီးဘာသာရပ်များ၏အုပ်စုအတွက်သာ Thalamus နှင့် hypothalamus လှုပ်ရှားမှု၏သက်သေအထောက်အထားရှိခဲ့သည်, ဦး နှောက်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphic areaရိယာ, ဇီဝကမ္မနှိုးဆွခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှလူသိများ။ လိင်အားလိင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် hypothalamic activation သည်အထီးဘာသာရပ်များတွင်သိသိသာသာကြီးကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ထို့အပြင်အထီးဘာသာရပ်များအတွက်သာ hypothalamic activation ၏ပြင်းအားအပြုသဘော SA ၏အဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်.
ဤတွေ့ရှိချက်များအရလိင်နှစ်မျိုးလုံး၏ ဦး နှောက်သည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုများကိုတုန့်ပြန်သည့်နည်းတူတူညီခြင်းနှင့်တူညီမှုရှိခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ erotica ကိုကြည့်သောအခါယောက်ျားများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသော SA သည် hypothalamus နှင့် ပတ်သက်၍ ဤနေရာတွင်တွေ့ရှိရသောအလုပ်လုပ်သောကျား၊